ओली सरकारका यातायातमन्त्रीको नीतिगत भ्रष्टाचार, बीपी राजमार्गमा ठुला सवारीलाई प्रवेश
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुविर महासेठले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन । बिपी राजमार्गमा गुड्ने सवारीको नयाँ मापदण्ड तोक्दै मालवाहक सवारी साधन १६।२ टनसम्मका र सार्वजनिक यातायात ४।२२५
महिनावारी के हो र कसरी व्यवस्थापना गर्ने ?
भगवती तिमल्सिना महिला किशोरावस्थामा प्रवेश गरेदेखि गर्भवती नहुँदासम्म हरेक महिना योनीबाट ५ दिनसम्म रगत बग्छ, यो नै महिनावारी हो। यो महिला हुनुको विशेषता पनि हो। यसले महिलालाई परिपक्व भएको र
‘निपा’को उच्च जोखिममा मकवानपुरको चेपाङ बस्ती
हेटौंडा, (नेस)। मकवानपुर जिल्लाको विकट गाउँपालिका हो, राक्सिराङ। उक्त गाउँपालिकाको अतिविकट वडा नम्बर–६ मा पर्ने सिलिङ्गेमा रहेको चेपाङ बस्तीमा हाल भारतलगायत देशमा तहल्का मच्चाएको खतरनाक ‘निपा’ भाइरस संक्रमणको जोखिम देखिएको
बर्डफ्लुको त्रास, ठाउँठाउँमा बर्डफ्लु, अवैध चल्ला बरामदमा प्रहरी सक्रिय
रोशन पराजुली छिमेकी जिल्ला चितवनमा कुखुरामा बर्डफ्लु प्रमाणित भएपछि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको क्षेत्रमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको टोलीले मानव स्वास्थ्यबारे अनुगमन थाल्दा मकवानपुर प्रहरीले अवैध कुखुराको खोजी र
सरकारको नीतिमा शिक्षा
ईश्वरराज ढकाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई विशेष महŒवका रूपमा हेरिएको छ। बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने कारणबारे अनुसन्धान गर्ने र विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ। एकसाता
रोशन पराजुली सामुदायिक विद्यालयप्रति आम अभिभावकको चासो कम भएका कारण संस्थागत विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको विशेषतः एसईईको नतिजालाई नियालेर कुरा काट्नेहरू प्रशस्तै छन्। यही कुरा चिर्दै आम अभिभावकको चासोलाई सामुदायिक
राष्ट्रियसभा बैठक शुरु, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिदैं
काठमाडौ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठक शुरु भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही जेठ ७ गते संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति
‘नत्र कांग्रेस साइनबोर्डमै सीमित रहन्छ’
झपटबहादुर रावल, सांसद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झपटबहादुर रावल कैलाली –२ बाट निर्वाचित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद् हुनुहुन्छ । पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका उहाँले सरकारले गरिरहेको काम जनताको चाहनाबमोजिम भएकाले पूरै
डा.नारायण खड्का, सांसद नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका डा. नारायण खड्का उदयपुर–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद हुनुहुन्छ । २०६४ र २०७० सालको संविधानसभामा पनि निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो। योसहित उहाँ जनताबाट
बलिउड नायिकाको अनौठो दुश्मनी
रश्मी थापा बलिउड फिल्म नगरीमा एउटा भनाइ छ कि हिरोइनहरू कहिल्यै पनि एकअर्काको असल साथी हुन सक्दैनन्। केही बलिउड नायिकाहरू नै यस कुराको उदाहरण बनेका छन्। बलिउडमा यस्ता केही नायिका
खुसी छु म आज तिमीभन्दा धेरै
कमल ढकाल कहिलेकाहीँ साना कथाले पनि ठूलै ज्ञान बोकेको हुन्छ। दन्त्य कथा होस् वा काल्पनिक वा सत्य घटना सन्देश लिन खोजेमा सब कथाले मान्छेले बोलेझंै बोल्छन्। यस्तै एउटा कथा यो
वाग्मती प्रदूषित हुनुमा सरकार र महानगर गैरजिम्मेवार
काठमाडौ । चलचित्रकर्मीले सरकार र महानगरको गैरजिम्मेवारीले वाग्मती प्रदूषित बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् । अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र चलचित्र निर्देशक समाजले आज संयुक्त रुपमा
विवादपछि द्रुतमार्गको ‘जिरो किलो’ फेरिँदै
–नारायण न्यौपाने खोकना . राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुत राजमार्गको खोकनास्थित यसअघि प्रस्तावित प्रस्थानविन्दु फेरिने संकेत देखिएको छ । स्थानीयवासीबाट सम्बोधन नै गर्न नसकिने मुआब्जा माग, तीव्र राजनीतीकरण र पुरातात्विक
सबै कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने
काठमाडौ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पाँच वर्षपछि बाध्यताले रोजगारीमा नेपाली विदेश जान नपर्ने तरीकाले काम भइरहेको बताउनुभएको छ । प्रेस चौतारी र प्रेस सेण्टर नेपाल रासस
गीतकर्मी संघको महाधिवेशन शनिवार
काठमाडौ । राष्ट्रिय संगीतकर्मी संघको चौथो महाधिवेशन यही जेठ १२ गते शनिवार भृकुटीमण्डपमा हुने भएको छ । दुई दिनसम्म जारी रहने उक्त महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वको चयन गर्नेछ । देशका विभिन्न
३३ किलो सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त गोरेको बयान अझै सकिएन
विराटनगर, । सुन तस्करी र सनम शाक्यको हत्याको मुख्य आरोपी गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीसँग जिल्ला अदालत मोरङमा आज दोस्रो दिन पनि बयान लिइएको छ । जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको रोहवरमा
२८ जना सहसचिवको सरुवा
काठमाडौँ । सरकारले आज २८ जना सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङका अनुसार १६ जना सहसचिवको काज सरुवा र उपसचिवबाट
शिक्षामा लगानी अनुसार प्रतिफल आएन: प्रधानमन्त्री
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा क्षेत्रबाट लगानीअनुसार राम्रो प्रतिफल आउन नसकेको बताउनुभएको छ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल ९हिसान०ले आयोजना गरेको ‘पाँचौँ कान्तिपुर हिसान
प्रितीलाई बेच्ने अर्का अभियुक्त पक्राउ
काठमाडौ । कुवेतमा लगेर राम्रो काम लगाइदिने भन्दै त्यहाको बेश्यालयमा लगेर बेची फरार भएका श्यामकुमार लामालाई बिश्व प्रहरीको अन्तराष्ट्रिय संगठन इन्टरपोलले कुवेतबाट पक्राउ गरी नेपाल डिर्पोट गरेको छ । सिन्धुपाल्चोककी
बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी नदिन मानअधिकारवादीको आग्रह
काठमाडौँ । गणतन्त्र दिवस पारेर आम माफी दिने तयारी गरिएको पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी नदिन अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले सरकारको ध्यानकर्षण गराएकोे छ । उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या